Isahluko 8 | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Izilimi zezizwe ezehlukene zehlukile kwezinye kodwa kunoMoya owodwa kuphela. Lo Moya uxhumanisa amabandla kuwo wonke umhlaba futhi uyinto eyodwa noNkulunkulu, akukho nomncane umahluko, futhi lokhu kuyinto engenakungatshazwa. UMoya oNgcwele manje uyababiza futhi izwi Lawo liyabavusa. Yizwi lomusa kaNkulunkulu. Bonke bamemeza igama elingcwele likaNkulunkulu uSomandla! Futhi bayadumisa futhi bayacula. Akunakwenzeka ukuba kube nokuphambuka emsebenzini woMoya oNgcwele, futhi laba bantu benza noma yini ukuqhubeka ngendlela efanele, abahlehli futhi izimangaliso zawo zinqwabelana phezu kwezinye izimangaliso. Kuyinto abantu abakuthola kulukhuni futhi kungenzeki ukuyicabanga.
UNkulunkulu uSomandla uyiNkosi yokuphila ezulwini nomhlaba! Uhleli esihlalweni sobukhosi esikhazimulayo futhi wahlulela umhlaba, ubusa konke, ubusa zonke izizwe; bonke abantu bayamkhothamela, bakhuleka Kuye, basondela Kuye futhi bakhuluma Naye. Kungakhathaleki ukuthi usukholwe isikhathi eside kangakanani kuNkulunkulu, siphakeme kangakanani isikhundla sakho noma kukhulu kangakanani ukuphakama kwakho, uma uphikisa uNkulunkulu enhliziyweni yakho kufanele wahlulelwe futhi uwe phambi Kwakhe, ukhiphe imisindo yokunxusa ngobuhlungu; lokhu impela kungukuvuna izithelo zezenzo zakho. Lo msindo wokulila ngumsindo wokuzwa ubuhlungu echibini lomlilo nesibabuli, futhi uyisililo sokujeziswa yinduku kaNkulunkulu yensimbi; lokhu kuwukwahlulelwa phambi kwesihlalo sikaKristu.
Abanye abantu bayesaba, abanye bayangabaza, abanye bayavuka, abanye bayaqaphela ukulalela ngokucophelela, abanye bezwa usizi olukhulu bese bephenduka futhi baqale kabusha, abanye bakhala kanzima ngobuhlungu, abanye bayeka konke futhi bafune ngokungabi nathemba, abanye abantu bayazihlola futhi bangabe besalokotha benze izinto ngobudlabha, abanye bafuna ngokushesha ukusondela kuNkulunkulu, abanye bahlola onembeza babo, bebuza ukuthi kungani izimpilo zabo zingakwazi ukuthuthuka. Abanye basadidekile, abanye bakhulula izinyawo zabo baqhubeke ngenkuthalo, bebamba isihluthulelo futhi bengachithi sikhathi ukwenza izimpilo zabo zibe nesizathu; abanye basangabaza futhi abacacelwa ngemibono, futhi umthwalo abawuthwalayo nabawuphethe ezinhliziyweni zabo uyasinda ngempela.
Uma umqondo wakho ungacacelwe khona-ke uMoya oNgcwele awunandlela yokusebenza ngaphakathi kuwe. Konke ogxila kukho, indlela ohamba ngayo nakho konke okulangazelelwa yinhliziyo yakho kugcwele imiqondo yakho kanye nokuzibona ulungile! Ngiyavutha ngenxa yokungabi nesineke—ngifisa kakhulu ukuthi benginganenza niphelele ngokushesha ukuze nisheshe nibe nomsebenzi Kimi futhi umthwalo Wami osindayo wenziwe lula. Kodwa ngokunibuka, ngibona kungenakwenzeka ukuba ngikhathazeke ngemiphumela. Kufanele ngilinde ngesineke, ngihambe kancane futhi kancane ngikusekele futhi ngikuhole. A, kufanele nivule izingqondo zenu! Lokho okufanele kushiywe, okuwubuthakathaka bakho obubulalayo, okuyizithiyo zakho, kucabange ngokwengeziwe emoyeni wakho futhi uhlanganyele Nami ngokwengeziwe. Engikufunayo ukuba izinhliziyo zenu zibheke kimi ngokuthula, hhayi ukukhuluma kwenu. Nina enifuna ngempela phambi Kwami, ngiyokwambula konke kinina. Isivinini sami siyashesha; uma nje inhliziyo yakho ibheke kimi futhi ulandela zonke izikhathi khona-ke intando Yami inganikezwa wena noma nini. Labo abanakayo ukulinda bayothola ukondliwa futhi bayoba nendlela eya phambili. Labo abangacabangi bayokuthola kulukhuni ukuqonda inhliziyo Yami, futhi bayohamba bafike kwangqingetshe.
Ngifisa ukuba nonke nisukume ngokushesha futhi nibambisane Nami, futhi nisondele Kimi ngazo zonke izikhathi, hhayi nje usuku nobusuku. Isandla sami kufanele sihlale sinidonsa futhi sinigqugquzelele phambili, sinincenge ukuba niye phambili futhi sinxuse ukuba niqhubeke! Aniyiqondi neze intando Yami. Ukubambezela kwemiqondo yenu nezinkimbinkimbi zomhlaba zinkulu kakhulu futhi anikwazi ukuba nokusondelana okujulile Nami. Ukukhuluma ngokusobala, niza Kimi lapho ninodaba, kodwa lapho ningenaludaba imiqondo yenu iyakhathazeka. Iba njengemakethe ekhululekile futhi igcwala isimo sobusathane, izinhliziyo zenu zilibala ukunaka izinto zomhlaba futhi aniyazi indlela yokuhlanganyela Nami. Bekungenzeka kanjani ukuba ngingakhathazeki ngani? Kodwa ngeke kusize ukukhathazeka. Isikhathi sinciphe kakhulu futhi umsebenzi unzima ngokwedlulele. Izinyathelo zami zindizela phambili; kufanele nibambisise konke eninakho, nibheke Kimi ngaso sonke isikhathi, nihlanganyele ngokusondelana Nami futhi intando Yami nakanjani iyokwambulwa kini noma ngasiphi isikhathi. Lapho niqonda inhliziyo Yami khona-ke ninendlela eya phambili. Ningabe nisangabaza. Yenzani ukuhlanganyela kweqiniso Nami, futhi ningayi enkohlisweni noma nizame ukuthi nihlakaniphe; lokhu kuyoba kuphela ukuzikhohlisa futhi kuyokwambulwa noma nini phambi kwesihlalo sikaKristu. Igolide langempela aliwesabi umlilo—lokhu kuyiqiniso! Ungabi nokungabaza, ungaphelelwa umdlandla futhi ube buthakathaka. Hlanganyela ngokuqondile ngokwengeziwe Nami emoyeni wakho, linda ngesineke futhi nakanjani ngiyokwambula kuwe ngokwesikhathi Sami. Wena ngempela, nakanjani kufanele uqaphele futhi ungavumeli umzamo Wami uchitheke kuwe, futhi ungalahlekelwa umzuzu. Lapho inhliziyo yakho ihlanganyela njalo Nami, lapho inhliziyo yakho iphila njalo phambi Kwami, khona-ke akukho muntu, akukho sigameko, akukho nto, akukho myeni, akukho ndodana noma indodakazi engaphazamisa ukuhlanganyela kwakho Nami enhliziyweni yakho. Lapho inhliziyo yakho ihlala ivinjwe nguMoya oNgcwele nalapho uhlanganyela Nami ngaso sonke isikhathi, intando Yami nakanjani iyokwembulwa kuwe. Lapho uhlala usondela Kimi ngale ndlela, kungakhathaleki okwezimo zakho nokuthi ukumuphi umcimbi, ngeke udideke noma ngabe uhlangana nobani noma nani, futhi uyoba nendlela eya phambili.
Uma ngokwejwayelekile ungadedeli lutho ezindabeni ezincane noma ezinkulu, uma inhliziyo nomqondo wakho kuhlanziwe, futhi uma uthule emoyeni wakho, khona-ke noma nini lapho uhlangana nenkinga ethile amazwi Ami ayovuka ngaphakathi kuwe, njengesibuko esikhanyayo ukuze uzibuke kuwo, futhi-ke uyoba nendlela eya phambili. Lokhu kubizwa ngokuthi ukuba nomuthi ofanele wesimo esifanele! Futhi sonke isimo nakanjani siyokwelashwa—uNkulunkulu unamandla onke kangaka. Nakanjani ngiyokhanyisa futhi ngikhanyisele bonke labo abalambele futhi bomele ukulunga nabafuna ngobuqotho. Ngiyokukhombisa zonke izimfihlakalo zomhlaba wokomoya futhi nginikhombise indlela eya phambili, nginenze nilahle izimo zenu ezindala ezikhohlakele ngokushesha, ukuze nithole ukuvuthwa kokuphila futhi nibe nomsebenzi Kimi, futhi umsebenzi wevangeli uqhubeke ngokushesha ngaphandle kokuphazanyiswa. Kulapho kuphela intando Yami iyokwaneliseka khona, kulapho kuphela uhlelo lukaNkulunkulu lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha luyofezwa khona ngokushesha okungenzeka. UNkulunkulu uyozuza umbuso futhi uyokwehlela emhlabeni, futhi siyongena ndawonye enkazimulweni!